Malunga nathi -Wuxi Tricera Trading Co., Ltd.
I-Wuxi Tricera Trading Co, Ltd ("iTrimill" ligama lethu lophawu) lushishino oluhlanganisiweyo
kunye norhwebo lweshishini olunama-20years ngamava obuchule kwimveliso yokugaya kunye nezinto zokugaya eziphambili.
Inani labasebenzi be-R & D
I-Wuxi Tricera Trading Co Co. (i "Trimill" ligama lethu lophawu) lishishini elidityanisiweyo kunye neshishini lokurhweba elinama-20years ngamava obuchwephesha kwimveliso yokugaya kunye nezinto zokugaya ezisisiseko. Ngokusekwe kumandla awomeleleyo efektri yethu-Wuxi Dahua Fine Ceramic Co, Ltd. umzi-mveliso wasekwa ngo-2001, ubekwe eWuxi, kwibhanki entle yeTaihu Lake, ziikhilomitha ezili-100 kuphela ukusuka eShanghai. Indawo yemveliso yenkampani ingaphezulu kwe-6000 yeemitha zesikwere, indawo yeofisi imalunga ne-1800 yeemitha zesikwere. Inkampani ineqela elisemagqabini labantu abalikhulu, kubandakanya abaphathi beengcali abangaphezulu kwe-10, iinjineli ezi-3 eziphakathi neziphezulu kwiqela lethu lolawulo. Inkampani yethu igxile kwimveliso ye-grinder ye-ceramic kunye nezinye iimveliso ezinxulumene noko, imveliso yonyaka ifumana i-5 iiseti zeemillion kwaye ineseti epheleleyo yemigca yokuvelisa kunye nezixhobo zovavanyo eziphambili.
Amava amakhulu e-DAHUA aquka uphuhliso, imveliso kunye nokusetyenziswa kweseramikhi zorhwebo. Kuwe oku kuthetha ukhuseleko, ukuthembeka kunye nenkonzo ebanzi yokubonisana.
Iindawo zeMveliso ezizezakho
I-DAHUA ineendawo zemveliso eziphantsi kweqela kwaye ke inefuthe elifanelekileyo kwiinkqubo zemveliso. Oku kuthetha ukuguquguquka okukhulu kunye nesiqinisekiso sonikezelo kuwe.
Iinkonzo zethu zokwenza izinto ezahlukeneyo zinokubonelela ngonikezelo olukhawulezayo nolona lufanelekileyo kubathengi behlabathi. Ukuhlangabezana neemfuno zabathengi zokwenza izinto ngokufanelekileyo, ezifanelekileyo nezikhuselekileyo kunye nokulungiswa komyalelo. Nokuba baphi abathengi bakho, naziphi na iimfuno zakho zinokufezekiswa ngenethiwekhi yothungelwano olomeleleyo.
UDahua udlulisa isiqinisekiso sekhwalithi ye-ISO9001 yamva nje kunye nophicotho-zincwadi olulandelayo lonyaka. Inkampani ilawula ngokungqongqo okusingqongileyo, izixhobo kunye neemveliso ngokungqinelana neemfuno zokuqinisekiswa. Konke ukuvavanywa komgangatho kunye nolawulo lwezixhobo zenkampani ziyahambelana neemfuno zomgangatho wamanye amazwe.
Inkampani yethu ifumene isiqinisekiso se-ISO 9 0 0 1: 2 0 1 5, kwaye iimveliso zikupasile ukuvavanywa kwemfuno zonxibelelwano zokutya ngamaziko ovavanyo e-TUV SGS. Iimveliso ziyahlangabezana neemfuno ze-ROHS, i-FDA, i-EU LFGB kunye namanye amazwe amaninzi.Imveliso zethu zithunyelwa ngqo e-USA, Japan, South Korea, Jemani, Ostriya, Singapore kunye namanye amazwe. Ukuqhubeka okuqhubekayo yinjongo yethu yanaphakade. Sinamandla okuyila imveliso kwaye sifumene amalungelo awodwa omenzi kubume bemveliso kunye nomxholo. Kwiminyaka yakutshanje, inkampani yethu iphuhlise ngempumelelo uthotho lweemveliso ezintsha, kubandakanya ityuwa yombane kunye ne-grinder yegriki, ityiwa yesandla kunye nepepper yokusila, umbane wekhofi yombane, iigridi zekofi, izakhiwo zeCeramic njl. kufikelelwe, sijonge phambili ekusebenzisaneni nawe!
Sinendawo zemveliso ezingabanini bamaqela kwaye ke sinefuthe elifanelekileyo kwiinkqubo zokuvelisa. Oku kuthetha ukuguquguquka okukhulu kunye nesiqinisekiso sonikezelo kuwe.
Abathengi bethu beyona nto iphambili yile: Japan KYOCERA, Japan HAIRO, England DYSON, China JOYOUNG, njl.
Imveliso elungileyo, sijonge phambili ekulandeleni intsebenziswano yoku-odola enkulu!
Imveliso njengoko ichaziwe, umgangatho njengoko kulindelwe.
Umlingane wexesha elide e-china, oqeqeshiweyo kwaye olungileyo! Wanelisekile!